सुष्माकाे पेटमा नवराजकाे बच्चा हुर्किएकाे कुरा कसरी आयो? साँचो कि छुटो? (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > सुष्माकाे पेटमा नवराजकाे बच्चा हुर्किएकाे कुरा कसरी आयो? साँचो कि छुटो? (भिडियो हेर्नुस्)
admin May 30, 2020 भिडियो, समाज 0
आफुलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने सविता भट्टराईले रुकुम जाजरकोट घटनालाई जातिय विभेदका कारण भएको घटना भएको बताएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा चर्चीत भएका घटनाहरुमा आफ्नो धारणा राख्दै आउने सविताले रुकुमको घटनामा पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले यो घटनालाई पनि जातिय विभेदकै हो भन्ने बताएकी छन् । उनले युवती नवराज विकको घरमा पटक पटक गएर बसेको, नवराजको परिवारले वुहारीको रुपमा स्वीकारी सकेको पनि देखिएको बताएकी छन् ।
उनले युवतीको आमाले जातिय शब्द प्रयोग गरेका कारण यो जातियताका कारण नै भएको घटना हो भनेर दावी गर्न सकिने बताएकी छन् । उनले अझ वडाध्यक्षको पनि संलग्नता देखिएका कारण यो घटनामा निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले अहिलेको जमानामा पनि जातियताका नाममा भएको यो घटनाले देशकै देश निहुरिएको बताइन् ।
प्रेममा बलिदान दिएर निधन भएका कारण उनीहरुलाई परिवारका सदस्यले माग गरे जस्तो शहिद घोषणा गर्न नमिल्ने बताइन् । उनले प्रेम कहानीका रुपमा यो विषय चर्चीत हुनसक्ने भएपनि सहिद भन्न नमिल्ने बताएकी छन् ।
स्वास्थ्यकर्मी तनुजाकाे ह’त्या कि आत्मह’त्या? तर यिनका लागि बोल्ने कोहि भएनन्!
क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्न गाउँ पसेका ४ व्यक्ति स्थानीयद्वारा यसरी लखेटिए!
आज भूत मेला, जहाँ भूतलाई तान्त्रिक विधिले यसरी भगाइन्छ